हतारको काम लतार भने झैँ ,हतारमा विहे गर्दा अहिले पछुतो ! – Khabar PatrikaNp
हतारको काम लतार भने झैँ ,हतारमा विहे गर्दा अहिले पछुतो !
August 21, 2020 151
नेपाली समाजमा चलनचल्तीको एउटा भनाई छ– ‘मानिसले हतारमा विहे गर्छन् तर पछि फुर्सदमा पछुताउँछन् ।’ यहाँका जोडीलाई अहिले यस्तै भएको छ । त्यस्तै सरकारले गर्ने गरेको ‘विहेवारि २० वर्षपारि’ भन्ने प्रचार पनि उनीहरुमध्ये कतिले सुनेनन् भने केहीले सुनेर पनि वास्ता गरेनन् । उनीहरु सानै उमेरमा विहे गरे । समय बित्दै गएपछि सानो उमेरमा गरिएको विहेका समस्याहरु अहिले आएर देखा परिरहेका छन्, त्यसैले त्यो जोडी यतिखेर पछुताउने गरेका छन् ।
टीकापुरकै सुध्नी चौधरीले १६ वर्षमा भागी विवाह गर्नुभयो । विवाहको लगत्तै गर्भवती हुनुभयो । परिपक्व नहुँदै गर्भवती हुँदा उहाँलाई सन्तान जन्माउन कठिनाई भयो । ‘‘पाठेघरको आकार सानो भएकोले बच्चा पेटमा राम्ररी नहुर्किएको डाक्टरले बताए । मलाई खानपिनमा ध्यान दिन र आराम गर्न भनियो’’, सुध्नीले भन्नुभयो, ‘‘धेरै दुःख पाए । बच्चा त जन्मियो तर सुस्त मनस्थितिको ।’’ सुध्नीले बालिकै हुँदा विवाह गरेका कारण घर सम्हाल्न नसक्दा मा नसिक तनाव धेरै झेलेको सम्झनुभयो । अहिले २० वर्ष टेकेकी सुध्नीलाई उमेर नपुग्दै विवाह गरेका कारण बच्चाको मानसिक अवस्था स्वस्थ नभएको भन्ने पीडाले पोल्छ । ‘‘जीवनबारे जान्न नपाउँदै विवाह गरियो, हतारमा बच्चा जन्माइयो’’, सुध्नीले भन्नुभयो, ‘‘पढाइलेखाई पनि बिग्रियो, जीवन पनि कष्टकर भयो । उमेर पुगेपछि मात्र विवाह गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अहिले आएर बल्ल मनन् गर्दैछु ।’’
Prevसिक्किममा नेपाली भाषालाई राष्ट्रिय भाषा